Bhutan: Nyika yeTinhira Dhiragoni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bhutan Breaking Nhau » Bhutan: Nyika yeTinhira Dhiragoni
Bhutan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
by Rita Payne - akakosha kuTN
Paro airport - Mufananidzo © Rita Payne
rakanyorwa Rita Payne - akakosha kuTN
Gross Yenyika Kufara
Mambo weHimalaya humambo hweBhutan akaita misoro yepasi rose paakazivisa kuti rufaro rwenyika rwese ndicho chinangwa chehurumende uye hupfumi haufanire kutorwa sechiyero chega chekubudirira. Mambo wazvino, semadzitateguru ake, akaedza kuchengetedza chiyero pakati pekufambira mberi nekusimudzira achichengetedza hutsika hwakasarudzika tsika nenhaka.
Runako rweBhutan, rine zita rekutanga, Druk Yul, rinoreva Nyika yeTinhira Dhiragoni, inova pachena kana ichibhururuka kupinda muumambo. Ndege inodzika nepakati pemakore pamusoro penzvimbo dzinoyevedza dzemakomo kumhara kuParo airport. Kusiyana neakawanda mabland uye akajairwa epasi rose mahedhiyo dhizaini uye dhizaini inoenderana nemaBhutanese masitayera akavezwa matenga edenga nembiru uye maBuddhist-themed murals pamadziro. Tashi Namgay Resort, yaive nzvimbo yedu huru panguva yekugara kwedu, iri nyore kutarisana nendege. Kufanana nezvimwe zvivakwa muBhutan iyo hotera yakaoma inowanawo kurudziro kubva kune echinyakare mapurani ekuvakira ichipa zvese zvinofarirwa zvinotarisirwa pane yakasarudzika nzvimbo.
Tiger's Nest uye zvimwe zvinokwezva
Paro inoonekwa seimwe yeakanakisa emipata yeBhutan. Takamuka pazuva rekutanga rakazara rekushanya kwedu kurira kwerwizi rwunoyerera rwunoyerera nepasi penzvimbo yehotera kubva kwainobva mumakomo eHimalaya. Takasangana nemutungamiriri wedu, Namgay, uye mutyairi wechidiki, Benjoy, uyo akazova shamwari dzedu dzinovimbwa uye dzakaziviswa mukushanya kwedu kwese.
Chinhu chekutanga pachirongwa chedu chingangodaro chakanyanya kunetsa. Chinangwa chedu chaive chekukwira kumusha wemamongi weParo Taktsang, unonyanya kuzivikanwa seTiger's Nest, unonamira pamucheto wedombo. Zvinosuruvarisa, ini ndaifanira kukanda mapfumo pasi apo takanga tisingasviki chikamu chechina chekukwira, ndichifanira kubvuma kuti ndakanga ndisina kukwana zvakakwana kupedzisa rwendo. Murume wangu, uyo akagadzirwa nezvinhu zvakaomarara, aizvidemba nechikonzero chekukwira kuimba yemamongi uye akafadzwa nemaonero anoshamisa. Iyo monastery inofungidzirwa kuti iri pane saiti iyo Guru Rinpoche inofungisisa mubako mune iro 8th century. Inoremekedzwa seimwe yenzvimbo dzinoyera kwazvo dzeBuddhist kwete muBhutan chete asi munzvimbo yese yeHimalaya.
Yekufamba maminetsi gumi kubva pakati peParo ndiKyichu Lhakhang tembere inoyevedza yezana ramakore rechinomwe. Zvakare mudunhu reParo ndiTa Dzong (National Museum) imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekufunda nezve chitendero cheBhutan, tsika nemagariro echinyakare nehunyanzvi. Kubva pano nzira inotungamira kuRinpung Dzong imba huru yemamongi nenhare inochengetera Monastic Body pamwe nehofisi yehurumende yeParo. Kubva kuParo takaenda nemotokari kuguta guru, Thimphu, kwatakaongorora kuPeri Phuntso Hotel yakakurumbira panzira yevashanyi.
Thimphu kuenda Punakha
Kwayedza mangwanani akatevera takasimuka kubva kuThimphu takananga Punakha tichidarika Dochula pass (3,100m) iyo yaiyedza mutyairi wedu, Benjoy, sezvo zvikamu zvemugwagwa zvakafukidzwa nemvura yakangoerekana yadonha uye nemhute huru. Pakasunungurwa matenga takapihwa mubairo wekutyisidzira wekumabvazuva kweHimalaya kusanganisira nepamusoro soro weBhutan.
Chinonyanya kukosha ndeyePunakha Dzong nhare yenhoroondo yakavakwa naShabdrung Ngawang Namgyel muna 1637 uye iri pamharadzano yePo Chu neMo Chu Rivers. Punakha yaive guta guru reBhutan kusvika 1955 uye ichiri senzvimbo yekugara yechando yaJe Khenpo, Chief Abbot. Iyo nhare, iyo yakaita chinzvimbo chakakosha muhupenyu hwechitendero uye hwemagariro enyika, yakaparadzwa pamatanho akasiyana enhoroondo yayo nemoto, mafashama uye kudengenyeka kwenyika uye yakadzoreredzwa pasi pekutungamira kwaMambo aripo.
Ngano uye ngano zvakawanda muBhutan. Humambo hwakazara netembere netembere dzakakumikidzwa kunamwari wevamwari, mamonki uye vanamati vezvitendero, mumwe nemumwe anonzi ane masimba ekurapa nekuunza maropafadzo. Takaenda parwendo pfupi kuenda kutemberi yakatsaurirwa kuna Drukpa Kunley, mumongi ane mukurumbira unonakidza. Akasvika pakuzivikanwa sa "Divine Madman weBhutan" nekuda kwehupenyu hwake hune mavara uye anozivikanwa kuve aine 'zvemashiripiti peni'; hazvishamise kuti tembere iyi yakabatana nekubereka. Vakaroora vasina vana vanofamba nzendo refu kundopa minamato kwaari uye mifananidzo iri kuratidzwa mutembere yeavo vanotenda kuti minyengetero yavo yakapindurwa.
Thimphu kuona nzvimbo achidzokera kuParo
Chirongwa chekudzoka kwedu kuThimphu chaisanganisira kushanya kuInstitute of Traditional Medicines uko munhu anokwanisa kudzidza nezvezvinhu zvemuno zvakasvibirira zvinoshandiswa kugadzirira huwandu hwezvigadzirwa zvehutano. Takaenderera kuFolk uye Heritage Museum, iyo inoratidza zvishandiso zvinoshandiswa nevarimi vechiBhutanese uye inopa pfungwa yehupenyu hwakaomarara hwavanotungamira munzvimbo dzisina kusimukira dzehumambo. Pedyo nePainting Chikoro icho chinonyanya kugadzirisa zvetsika kupenda, zvivezwa uye huni zvakavezwa
Manheru manheru takashanyira Great Buddha Dordenma, chifananidzo chikuru cheBuddha chakagara pamusoro pegomo rinotarisa Thimphu. Anenge makumi mashanu nemashanu emamita kukwirira (52 tsoka) ndiwo mumwe wemifananidzo mikuru uye yakareba kwazvo yeBuddha. Maonero aThimphu pazasi aifema. Dzimwe nzvimbo dzekufarira imusangano iyo inogadzirwa nemaoko mapepa uye yeNational Handicraft Emporium, iyo sezita rayo rinoratidzira, ipfuma yezvigadzirwa zvakagadzirwa muBhutan
Kunyangwe Bhutan yakaroorwa pakati pevavakidzani vahombe, India neChina, yanga ichibudirira mukuchengetedza mutauro wayo, tsika nemagariro. Sangano rayo rakanyatsoenzana. Nepo dudziro yemhuri iri yemadzitateguru, nzvimbo dzemhuri dzakakamurwa zvakaenzana pakati pevanakomana nevanasikana. Mutauro wepamutemo wehumambo ndiDzongkha, mutauro wakafanana neTibetan. Karenda yeBhutanese yakavakirwa paTibetan system iyo zvakare inotora kubva kuChinese kutenderera kwemwedzi.
Varume nevakadzi vanopfeka rokwe ravo renyika kunyangwe munhu achiona vanhu vazhinji muhembe dzekumadokero mumaguta nemadhorobha. Varume vanotarisa vachirova vakapfeka nguo refu vakasunga bhandi muchiuno. Vakadzi vakapfeka nguwo refu-refu dzemakumbo dzakagadzirwa nemicheka ine mavara uye vanopfeka zvishongo zvakasarudzika zvakagadzirwa kubva pamakorari, maparera, turquoise nematombo anokosha eagate anonzi maBhutanese "misodzi yevaMwari".
Chikafu cheBhutanese chiri nyore uye chine hutano kunyangwe chisingakwanise zvinofarirwa nemunhu wese. Tsika yechinyakare inosanganisira yechinyakare bhinzi uye sosi mutsi, nyama yenguruve kana nyama yemombe ine dzakasiyana siyana miriwo ndiro yakabikwa nemishonga yemuno. Mumwe anogona kuve nechikafu chemuno nemitengo yakadzikama mumaresitorendi maresitorendi uye maresitorendi uye kunyange kudya mudzimba dzevamwe dzakasainwa nemasangano ekufambisa. Kune vashanyi vanoshuvira kunamatira kune yakajairwa fizi, huwandu hwemahotera epasirese anoshandira maIndia, kumadokero uye zvimwe zvekunze chikafu.
Tourism ndiyo sosi yakakosha yemari
Sezvambotaurwa, Mambo vakangwarira kuchengetedza tsika nemagariro enyika kubva kukuvara kunogona kukonzerwa nekutashanya kukuru. Bhutan inyika yakavharirwa-nyika ine vanhu zviuru mazana manomwe chete, ine sarudzo shoma dzekunze kana indasitiri nekuda kwenzvimbo yayo ine makomo. Vazhinji vevagari venyika varombo, uye 700,000% vanogara pasi pehurombo hwepasi rose. Tourism ndiyo imwe yenzvimbo huru yemari yeBhutan. Vashanyi vanofanirwa kushandisa mashoma emadhora mazana maviri pamunhu pazuva kubva Zvita - Kukadzi, uye Chikumi - Nyamavhuvhu uye $ 12 pamunhu pazuva kubva munaKurume-Chivabvu, uye Gunyana - Gunyana. MaIndia, Bangladesh, neMaldivian vanoregererwa pamutero wezuva nezuva. Kune zvekare zvimwe zvekudzikisira zviripo, kunyanya kune vadzidzi nevana vane makore mashanu kusvika gumi nemaviri. Iyi mutemo yakakwevera kushoropodzwa kubva kune vamwe nekuda kwekusarudzira vasina tsime. Nekudaro, zviri nekuda kwemari kubva kushanyi iyo vanhu veBhutan vanokwanisa kunakidzwa nerusununguko rwehutano, dzidzo yemahara, hurombo uye zvigadziriso.
Bhutan inokomborerwa neinoshamisa renji yezvisikwa zviwanikwa uye nzvimbo dzinotangira kubva kune chando-akapfeka Himalaya makomo uye glaciers kune yakasvibira masango. Zvinopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveBhutan zvakafukidzwa nemasango umo shiri dzinoshamisa, mhuka uye hupenyu hweshiri hunobudirira. Humambo hune mapaki emarudzi akati wandei, imwe yeinonyanya kushanyirwa ndiyo Manas Sanctuary yemahombekombe pamahombekombe erwizi rwaManas iyo inogadzira muganho nenyika yeIndia yeAssam. Pano munhu anogona kuwana iri pangozi imwe nyanga ine chipembere, nzou, ingwe, nyati, mhando zhinji dzemhara uye yegoridhe langur, tsoko diki iyo yakasarudzika kudunhu rino. Nemarudzi mazhinji emhuka dzesango ave kutsakatika mune mamwe matunhu epasi nekuda kwekuuraya kana kurasikirwa kwenzvimbo nekuda kwekusimudzira kwemaguta, Bhutan iri kupa zviwanikwa zvakanyanya kuchengetedza hupenyu hwesango.
Kuenda kubva kuBhutan
Munguva yedu yekugara pfupi takakwanisa chete kuona chikamu cheizvo zvinopihwa nehumambo. Mamiriro ekunze, zvakare zvakare, akazove chinhu sezvo isu takagadzirira kusiya Bhutan. Takatandara muParo husiku tichinetseka sezvo makore akafukidza makomo uye kwakanaya zvakanyanya usiku. Takakatyamadzwa nemushandi wekugamuchira vanhu pahotera paakatizivisa zvisingaite kuti ndege dzaiwanzomiswa nekuda kwemamiriro ekunze akaipa. Muchiitiko icho ivo vanamwari vakanyemwerera patiri, mvura yakamira uye isu takakwanisa kubhururuka kunze sezvakarongwa. Mune isingasviki awa takadzokera kuguta reNepalese, Kathmandu, uye kushanya kwedu kuBhutan kwakaita sekurota. Hazvishamise kuti ongororo muLonely Planet inoisa Bhutan pamusoro pezita renyika dzekushanyira pasi. Hurumende iri kurwira kuchengetedza tsika dzeBhutan dzakachengetedzwa zvakanaka pamberi pebudiriro nekukurumidza. Mumwe anogona kungotarisira kuti kukwezva kwehumambo hwemashiripiti hakuzoparadzwa nekupinda kwevashanyi sezvo izwi richipararira pamusoro pehunaku hwaro.
Tashi Namgay Resort, Paro - Mufananidzo © Rita Payne
Kuona kweTiger's Nest Monastery - Mufananidzo © Rita Payne
Kyichu Lhakhang tembere - Mufananidzo © Rita Payne
Punakha Dzong - Mufananidzo © Geoffrey Payne
Chikafu cheBhutanese chikafu - Mufananidzo © Rita Payne
Mukuru Buddha Dordenma - Mufananidzo © Rita Payne
Bhutanese landscape - Mufananidzo © Rita Payne
Rita Payne - akakosha kuTN